Turku Castle namuhla zithandwa kakhulu. Phela, lokhu ingenye yezindawo esiphawuleka kakhulu eFinland. Kulesi somlando has elinye igama - castle Abosky. Manje ehhotela kanye Museum zomlando uhlala phakathi kwezingange zalo. Nokho, ngokuvamile uheha abahambi enqabeni jousting tournaments ukuthi Sinesithakazelo kuwo wonke umuntu.
I inqaba lakhiwa 1280. Ekuqaleni Turku lenqaba Yakhiwa njengoba Fort wezempi. Lapho Duke Yuhane Turku selande laze laba enqabeni nenhle in isitayela Renaissance. Ososayensi nezazi-mlando eziye zafunda yokuvala, cabanga ukuthi ukwakhiwa enqabeni yayisekelwe amasampula kusuka Gotland. Wakhonza njengephayona zokwakha grey egwadle, futhi isitini kamuva.
Turku castle lwenzelwe ezempi kanye ukuzivikela izinjongo, kodwa Ephakathi enqabeni wayesalokhu iyisikhungo sokuqondisa esibalulekile, lapho babevame iNkosi yaseSweden, ohlala endaweni Finland.
Ngo 1303 uMbusi Finland wayengomunye wamadodana ka-Magnus Ladulosa - Valdemar. Wayefuna ifa lakhe futhi castle kakhulu Abosky ngokushesha kwaphenduka, nibakhiphele ngaphandle kwekamu ibe yasibamba endaweni enamandla ukuvikela izithakazelo Swedish. Bhekani ningethuki, ngokuba ezithakazelisayo wathutha ngokuzenzakalelayo dolobha Finnish e umuzi wezentengiselwano Turku ukukhiqiza zonke ukuhweba amalungelo okuhlobene. Ukuchuma endaweni castle kwaqhubeka phakathi nayo yonke XIV futhi xv eminyaka. Nokho Abosky Castle aye waba isayithi zempi zezombusazwe Denmark kanye eSweden, kanti-isiqongo wenhlokomo kwaba ayehlasela edolobheni amabutho Danish e 1509, ngesikhathi lapho izakhamuzi odumileyo babulawa kanye abangafanga baba iziboshwa.
Ngemva kwekhulu le-XVI Abosky Castle (Turku) kancane kancane aqala ukuncipha. Ngekhulu XVIII Turku Castle yayisetshenziswa kakhulu njengoba Igumbi futhi ejele yesifundazwe. Khona-ke le nqaba waba arsenal ibekwe ibutho isiSwidi, ngisho kamuva kwakukhona emabhalekisini Royal Swedish imikhumbi skerry.
Ekupheleni kwekhulu elidlule enqabeni zaqala Museum zomlando zomuzi Turku.
Kwaphela isikhathi eside ubufakazi bokuba khona kwalesi somlando esiye sabhekana zezimbali okusheshayo nasekubhujisweni. Ikakhulukazi zonakala enqabeni phakathi neMpi Yezwe II.
Namuhla le nqaba e Turku ingenye iminyuziyamu ngobukhulu futhi ebaluleke kakhulu eFinland.
I inqaba zingahlukaniswa zibe eziyinkimbinkimbi ezimbili yezakhiwo - the izindlu kanye castle uqobo. Museum of History Itholakala izindlu. Mangisho ukuthi Museum oluthatha indawo eside - wonke ikota. Isakhiwo nokwakhiwa uvumele lokuphinda ukubukeka mlando edolobheni. It Ubuye izitolo ezithakazelisayo, ungaya kuphi nganoma yisiphi isikhathi.
Turku Castle noma Castle Abosky eFinland livulekele izivakashi kanye nezivakashi nsuku zonke ngaphandle ngeMisombuluko.
Abosky Castle (Finland) edonsela hhayi kuphela ukunambitheka ngendlela emangalisayo, kodwa iqiniso lokuthi ngokuvamile iphatha ezihlukahlukene ukwenza izinto ezithakazelisayo. Abavakashi abafika nezingane zabo, ukuvakashela hlelo, eziklanyelwe zabahamba abasha. Ngokwesibonelo, kungase kube Maritime Centre Forum Marinum lapho iqoqo eliyingqayizivele wale mikhumbi nezakhiwo. I plus enkulu yokuthi izingane ezingaphansi kweminyaka engu-7 ubudala ungavakashela lokhu embukisweni mahhala.
Real jousting tournaments labetibambile e Turku ehlobo ngempelasonto. Lesi siqiwu ingaphansi castle izindonga edolobheni sika zenzeka knightly izimpi. Lo mcimbi isiphetho sitawuba ngeLisontfo. Isibhakabhaka mqhudelwano ikuvumela ugxumela wenkathi ephakathi. Izivakashi bazokwazi Kuningi emasikweni Chivalry we izinkulumo. Ngaphezu kwalokho, fair usebenzela endaweni.
Okwamanje, ngaphezu ngokuvakashela Museum, elinikeza embukisweni omangalisayo, ungase futhi ukuqasha ihholo medieval emikhosini. Kukhona ngokuvamile omshado.
Ukuze izivakashi yokudlela isitayela ephakathi "Basement Duke Johann" kanye Museum esitolo Fatabur.
By the way, nge ukhiye efanayo futhi ahlobene ncwadi zaseScandinavia inganekwane zezingane ngokuthi "Old endlini Aboskogo castle."
Lapho ukubheka ophumayo eziphuthumayo emotweni lesibili ekilasini?
Luhlangotsi - Iyini? Concept, isimiso, ukwakheka
Samsung 5230: Ukucaciswa, izithombe kanye nokubuyekeza. Indlela ukukhanya Samsung 5230?
"Ngizoninika uthando": nabalingisi we melodrama Russian
Kanjani ukuhlela ejensi translation - siqu imibono yabo ibhizinisi
Flux - ukwelashwa ekhaya
Indlela Dweba lwamapeni noyinki ephepheni?
Diathesis - lokhu ... Izinhlobo, Ubangela, Ukwelashwa diathesis